YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, December 13
မြန်မာအစိုးရ ပညာရေး ဥပဒေသစ် သမိုင်းသင်လျှင် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မည်
Tuesday, 06 December 2011 02:18 မောက္ခ ပြည်တွင်းသတင်း
ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာအစိုးရသတင်းစာများတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဌာန်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ပြဌာန်းလိုက်သော ဥပဒေတွင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ ပညာအရည်အသွေး မြင့်မားရေးအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြဌာန်းထားသော သင်ရိုးညွန်းတမ်းနဲ့ သင်ရိုးမာတိကာများပါ ဘာသာရပ်များအတိုင်းဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များအတွက် သင်ခန်းစာများ ထပ်ဆောင်း၍ဖြစ်စေ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ပုဂ္ဂလိက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သည့် ကျောင်းကို ဆိုလိုသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
" အစိုးရက ပြဌာန်းထားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုပဲ သင်ရမယ်ဆိုတော့ ဘာထူးမှာလဲ၊ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ။ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေမှာက ပညာရေးက လွတ်လပ်မှုအပြည့်ရှိတယ်၊ သင်ရိုးညွန်းတမ်းက တစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း မတူဘူး၊ သင်ရိုးကောင်းမှ ကျောင်းသားတွေ အရည်အချင်းတက်မယ်၊ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကြတယ်၊ အစိုးရက သူတို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေအရ ဆိုရင် Student Center စနစ်နဲ့သွား လို့မဖြစ်ဘူး၊ ဒီစနစ်အရ ဆိုရင် ကျောင်းသားတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ မေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့၊ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲရေးကို ထိခိုက်စေမယ့် သင်ကြားရေးကို မသင်ရဆိုတော့၊ သင်တဲ့ဆရာကို ဘယ်အချိန်မဆို ထောင်ထဲ ဆွဲထည့်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့သဘောပဲ" ဟု မဲဆောက်မြို့ စီဒီစီ အဆင့်မြင့်ကျောင်းတွင် သင်ကြားနေသည့် ဆရာကြီးတစ်ဦးမှ ပြောဆိုသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင် သင်ကြားမည့် ဆရာများသည် လုပ်သက်ငါးနှစ်ရှိရမည်ပြီး ပညာရေးဌာနတွင် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဆရာလုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းဆရာများသည် နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
"ကျမက ထိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာ လုပ်လာတာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဘွဲ့ရတယ် ထိုင်းမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်၊ ထိုင်းအစိုးရဆီမှာ လက်မှတ်လုပ်စရာမလိုဘူး၊ ဒီကကျောင်းတွေက လွတ်လပ်မှု အပြည့်ရှိတယ်၊ အစိုးရကလည်း ဘာမှဝင်ရောက်စွပ်ဖက်တာ မရှိဘူး" ဟု ဘန်ကောက်နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတွင် သင်ကြားနေသည့် ဆရာမ နှင်းဆီ ကလည်း သူ့အတွေ့အကြုံကို ပြောသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်ရာတွင် ပြည်ပနိုင်ငံအကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရဟု ပါရှိသည်။ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးစီးတည်ထောင်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရ ဟုပါရှိပြီး၊ သာသနာပြုကျောင်းမဖြစ်စေရ ဟုလည်းပါရှိသည်။
"ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ် (သို့) ကောလိပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်ကြတယ်၊ အဲဒီလို ပူးပေါင်း မတည်ထောင်ဘဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေ အထားအရဆိုရင် ပိုခက်ခဲမယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျောင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှု လိုအပ်တယ်၊ အစိုးရပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအရဆိုရင် သူတို့မကြိုက်တဲ့ တစ်နေ့မှာ အရေးယူလို့ရနေတယ်၊ နိုင်ငံခြားသား ဆရာတွေကို ခေါ်မယ့်ကိစ္စကလည်း ဒီဥပဒေ အရဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေသိပ်မရှိဘူး" ဟု စီဒီစီ ကျောင်းမှ ဆရာက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
စီဒီစီ ကျောင်းတွင် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ်ကို သင်ကြားနေသည့် ဆရာဦးလှရွှေ ကလည်း
" ဒီဥဒေကို ကျနော် လေ့လာကြည့်တယ်၊ ရေးထားတာတော့ ဗလ သုံးတန်ရှိရမယ်ပေါ့၊ အဲဒါနဲ့ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတဲအချက်က သင်ကြားရမယ့် သာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးကို မပို့ချရ ဆိုပြီး ပြောထားတယ်၊ ဒါဆိုရင် သမိုင်းသင်တဲ့ဆရာက သူတို့မကြိုက်ရင် ထောင်ဒဏ် တနှစ်ကနေ သုံးနှစ်နှင့် ကျပ်သုံးသိန်း ထက်မပိုတဲ့ ဒဏ်ငွေကိုပါ ဆောင်ရဦးမယ့် သဘောရှိတယ်၊ သမိုင်းဆိုတာ နိုင်ငံရေးကို သင်တာပဲလေ၊ ဒီ ဥပဒေအရ ဆိုရင် ညံ့ဖျင်းနေတဲ့ ပညာရေးက ကောင်းလာမယ့် အခြေအနေ မရှိဘူး" ဟု မြန်မာအစိုးရ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/13/20112အကြံပြုခြင်း
အများမျှော်လင့်နေကြတဲ့ G.T.U အောင်စာရင်း.........
ကျသူက ကျနဲ့ပေါ့ ပြောစရာရှိတာက....
Pretestကလည်း10မှတ်ထည့်ပေါင်းမယ်ဆို......Viva test လည်းအမှတ်ပေးမယ်ဆို.....ခုတော့
မမှီလို့လား ဒါမှမဟုတ် ဖြုတ်ချတာလား
အောင်ချက်နည်းသွားတာနဲ့ပဲ အထက်(နောက်တစ်တန်း)ကိုတက်သွားတဲ့သူတွေက အရည်အချင်းမှီတယ်ပေါ့
ဒါဆို မေဂျာတစ်ခုလုံးကျတာတွေ တစ်မေဂျာမှာတစ်ယောက်ပဲအောင်တာတွေကဘာတွေလဲ
ဒီလိုလုပ်လိုက်ရလို့ တာဝန်ရှိသူတွေ စားဝင်အိပ်ပျော်ကြတယ်ပေါ့
တစ်ချို့ဆို ROLL No.တွေကတော်တော်မြင့်တက်လာကြတယ်နော် ဒါတွေကရောဘာတွေလဲတစ်ခုပဲသိချင်တာပါ စာမေးပွဲအောင်စာရသင်းကိုများ မဲနှိုက်ရွေးသလားလို့......?
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/13/20110အကြံပြုခြင်း
လျှပ်စစ် မီတာခများအား နောက်ထပ် တစ်ဆ ထပ်တိုးမည်
Tuesday, 13 December 2011 21:06
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက် နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်မီတာခများကို နောက်ထပ် တစ်ဆထပ်တိုး ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဓါတ်အားခနှုန်းထားများကို အိမ်သုံးမီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်၊ စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မီတာတစ်ယူနစ် လျှင် ၅၀ ကျပ်ကောက်ခံခဲ့ရာမှ လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ အိမ်သုံးမီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်၊ လုပ်ငန်းသုံး မီတာတစ်ယူနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်သို့ ပြောင်းလဲတိုးမြှင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး အတွက် အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနထံမှ ရေအားလျှပ်စစ် တစ်ယူနစ်လျှင် ၂၀ ကျပ်နှုန်း၊ ဓါတ်ငွေ့တာဘိုင်များ အသုံးပြု ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် တစ်ယူ နစ်လျှင် ၁၂၇ ကျပ် အကုန်အကျခံကာ ဖြန့်ဖြူးပေးနေရခြင်းကြောင့် အရှုံးပေါ်လျက်ရှိ၍ နိုင်ငံတော်မှ စိုက်ထုတ်ပေးနေရလျက် ရှိကြောင်း၊ ဓါတ်အားခနှုန်းထားများ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံခြင်းဖြင့် ရသုံးငွေမျှခြေသို့ ရောက်ရှိကာ ဓါတ်အားပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများနှင့် တိုးချဲ့တပ်ဆင်နိုင်ရေးတို့ကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
နှစ်ဆတက်လိုက်ရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုဈေးကြီးသွားမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေ က ကျွန်တော်တို့ဆီက စွမ်းအင် ၀ယ်သုံးရတဲ့သူတွေလေ။ သူတို့ထက်ဈေးပိုများလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ပြည်သူတွေ ဖောင်စီးရင်းရေငတ် ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အများပြည်သူနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံတဲ့နေရာမှာ ညင်သာမှုရှိဖို့လိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှဒေသတွင်း (၁၅)နိုင်ငံ၏ ဓါတ်အားခနှုန်းထားများကို နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းပြည်ဓါတ်အားရရှိရေးနှင့် ၀န်ကြီးဌာနရပ်တည်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရ ကြောင်း သိရသည်။
ဓါတ်အားခတိုးမြှင့် ကောက်ခံချိန်တွင်လည်း ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ ၌ အဆင့် (၁၃)ထိသာ ရောက်နိုင်၍ နှုန်းထား နည်းပါးသော နိုင်ငံစာရင်းတွင်သာ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အခြေအနေသည် ဌာနအနေဖြင့် ရသုံးငွေ ကာမိရုံမျှခြေခန့်မျှသာ ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
“အခုဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့နှုန်းက ဒေသတွင်း (၁၅)နိုင်ငံမှ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက အနည်းဆုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကုန်ကျစရိတ်က ပျှမ်းမျှတစ်ယူနစ်ကို ကျပ် (၆၀) ကျော်လောက် ကုန်ကျပါ တယ်။ ရောင်းတာက ၃၇ ကျပ်၊ ပြား ၄၀ နှုန်းလောက်ပဲ ရောင်းရတယ်။ တစ်ယူနစ်ရောင်းတိုင်း ၂၉ ကျပ်၊ ၈၄ ပြား၊ ကျပ် ၃၀ နီးပါးအရှုံးပေါ် ပါတယ်။ ဒီနှုန်းအတိုင်းသာသွားရင် လာမယ့်နှစ်မှာ ကျပ် ၂၄၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ရှုံးပါမယ်။ အခုလို အရှုံးခံပြီးဆက်ရောင်းနေရင် ကြာလေရှုံးလေနဲ့ နောက်ဆုံးနလန်မထူနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်ကာမိဖို့နဲ့ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြည်သူလူထုက လက်ခံယုံကြည် ပေးစေလိုပါတယ်” ဟု အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦးက ပြော ကြားပါသည်။
အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း ၃၉၆ မြို့အနက် မြို့ပေါင်း ၂၂၀ ခန့်၊ ကျေးရွာပေါင်း ၆၄၃၄၆ ရှိရာ မီးလင်းပြီးကျေးရွာ ပေါင်း ၆၇၇၄ ရွာအနက်မှ ကျေးရွာ ပေါင်း ၁၆၀၀(၁၀ ရာခိုင်နှုန်း)ခန့်၊ အိမ်ထောင်စုဦးရေပေါင်း ၈၉၀၅၆၇၄ အနက်မှ မီးရရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၂၃၂၃၄၆၇(၂၆ ရာခိုင်နှုန်း) ခန့်ကို ဓါတ်အားစနစ်ဖြင့် မီးပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အိမ်သုံးမီတာဈေးများမှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဆင့် ၁၃ နေရာတွင် ရှိမည်ဖြစ် ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဖြင့်ယှဉ် ပါက အဆင့် ၈ နေရာသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း တွက်ချက်မှုများ အရသိရသည်။
“ဈေးတွေတက်သွားတဲ့အပေါ် မှာ သေသေချာချာစိစစ်ပြီးတော့ အစိုးရ အခက်အခဲကိုလည်း ဝေဖန် စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွန်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရနေတဲ့အချိန်မှာ၊ တကယ်ပေး ဆောင်သင့်တဲ့အခွန်ကို ပြည်သူပြည်သားတွေက ၁၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပဲ ပေးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရ အနေနဲ့ သယံဇာတတွေရောင်းစားပြီး အသက်ဆက်နေရတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာSubsidite လုပ်နေတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို လျှော့ချရမှာ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်။ အခုလျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှာ အစိုးရအနေနဲ့ Subsiditeလုပ်တာတွေကို လျှော့ချ ပစ်လိုက်တာလို့ မြင်တယ်။ ဒါမှ အစိုးရအနေနဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် လာမယ့်နှစ်မှာ ၀န်ထမ်းတွေကို လစာတိုးမြှင့်ပေးနိုင်မယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထုကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ မျှမျှတတ စဉ်းစားပြီး အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက် တိုးမြှင့်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ မြင်တယ်။ ငါးဆယ်ကနေ တစ်ရာကိုတိုးမယ် ဆိုတာကတော့ များလွန်းတယ်။ ဥပမာ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ကို ၂၅ကျပ်က နေ ၄၀ ကျပ်လောက်ပဲ စတိုးကြည့် ပြီးတော့ နောက်၆လကြာရင် ၅၀ ကနေ ၇၅ ကျပ်ထိတိုး။ နောက် ၆လလောက် ကြာရင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလည်း ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဟိုတစ်ခါ လောင်စာဆီတိုးတုန်းကလို ကြီးကြီးမားမား Impact မဖြစ်ဖို့ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ဆင့်ချင်း တိုးသွား သင့်တယ်။ တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်း တိုးသွားရင် ပြည်သူလူထုကို ဖိစီးမှုလည်းမဖြစ်စေဘူးလို့ မြင်တယ်။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုရလို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့သူ ပိုများလာတယ်။ ဒါကို ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း မြင်တယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သက်သာတာက နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို အများကြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလျင်စလို များများမတိုး ဖို့လိုပါတယ်။ နှစ်ဆတက်လိုက်ရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုဈေးကြီးသွားမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေက ကျွန်တော်တို့ဆီက စွမ်းအင်ဝယ်သုံး ရတဲ့သူတွေလေ။ သူတို့ထက်ဈေးပိုများလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ပြည်သူတွေ ဖောင်စီးရင်းရေငတ် ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အများပြည်သူနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံတဲ့နေရာ မှာ ညင်သာမှုရှိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ရှုံးနေတာ၊ ကိုယ်မကိုက်တာ တစ်ခုတည်း ကြည့်လို့မရဘူး။ နှစ်ဘက်မျှ ကြည့်ရမယ်။ အများပြည်သူက လည်း မျှကြည့်ပေးရမယ်။ ရုတ်တရက် ဈေးတွေထိုးတက်သွားပြီ ငါတို့ တော့ဒုက္ခပဲလို့ အမြင်တစ်ခုတည်း ကြည့်လို့မရဘူး။ မီးရထားခတွေ ၁၀ဆ တက်လိုက်သလို မလုပ်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တာဟာ လူထုက အစိုးရအပေါ် အမြင်မကြည် ဖြစ်သွားစေမယ်။ စစချင်း ၄ ဆလောက်တက်၊ တဖြည်းဖြည်းတက်ရင် ပြောစရာမဖြစ်တော့ဘူး။ မကိုက်လို့ တက်တယ်ကွာဆိုပြီး ငါတကော ကောတဲ့ပုံစံထက် ပြည်သူလူထုကို အရင်ချပြသင့်တယ်။ ဘာကြောင့်တက်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြသင့်တယ်။ မီးရထားခတွေ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တက်လိုက်တဲ့အတွက် ပြောစရာ ဖြစ်သွားတယ်။ လျှပ်စစ်ခကို မီးရထားခလို လုပ်လိုက်ရင်တော့ အစိုးရ Image အောက်သွားနိုင်တယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မီတာခနှုန်းက အရမ်းများနေတယ်။ အဲဒီအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်း ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်” ဟု Eleven Media Group မှ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နှစ်ဆ မြင့်တက်လိုက်သည့် ဈေးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတ်အားခအား အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံအချို့၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက် (အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်ခအား အနည်းအများဖြင့် တန်းစီခြင်း)
(နှုန်းသစ် ၅၀ ကျပ် - ၁၀၀ ကျပ်) Price- cents/KWh
(နှုန်းသစ် ၅၀ ကျပ် - ၁၀၀ ကျပ်) Price – cents/KWh
ဒေသတွင်း နိုင်ငံအချို့၏ ဂျီဒီပီနှင့် လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ၂၀၁၀ အနီးစပ်ဆုံး)
ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ တင်သွင်းတဲ့ “လယ်ယာမြေ ဥပဒေ(မူကြမ်း)”အား လယ်သမားတွေက ကန့်ကွက်ကြောင်းစာ သမ္မတထံပေးပို့
by Burma VJ Media Network on Tuesday, December 13, 2011 at 3:30am
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဦးဌေးဦး တင်သွင်းသော “၂၀၁၁ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ(မူကြမ်း) ” အား တောင်သူလယ်သမားတွေက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ ကန့်ကွက်ကြောင်းကို စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုး၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ စာတိုက်ကနေ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိတ္တူကို လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးဆီသို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံကိုလည်း ပေးပို့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်းလှ ၊ ဇလွန် ၊ ပဲခူးတိုင်းထဲက ကြို့ပင်ကောက်၊ နတ်တလင်း ၊ ဇီးကုန်း ၊ သာယာဝတီ ၊ မကွေးတိုင်း အနောက်ခြမ်းမှကံမ၊ ပြည်မြို့နယ်က တောင်သူလယ်သမားတွေ၊ပန်းတောင်းမြို့နယ်က တောင်သူလယ်သမားတွေနှင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်က တောင်သူလယ်သမားတွေကနေ ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်တွေ စုပေါင်းရေးထိုးပြီးတော့ သမ္မတဆီကို တင်မှာပါ။
“မိမိတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်မြေတွေကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေဟာ ဒီဥပဒေအတိုင်းသာ သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တောင်သူလယ်သမားအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်တဲ့ အချက်တွေ မပါရှိပါဘူး။အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီဥပဒေကို လွှတ်တော်မှာ ကန့်ကွက်ဖို့အတွက် အားလုံး လက်မှတ်ဝိုင်းထိုးနေကြတာပါ။နိုင်ငံတော် သမ္မတဆီထိအောင်လည်း တင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။”လို့ မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်က တောင်သူလယ်သမား ကိုသန်းစိုးက ပြောပါတယ်။
ဦးဌေးဦး တင်သွင်းတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေမူကြမ်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အများစုဖြစ်တဲ့ တောင်သူလယ်သမား အကျိုးကို လုံးဝဖော်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိပဲနဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေကိုပဲ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ အခြေခံမူ ၂၃(က) မှာ နိုင်ငံတော်သည် တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းဆောင်ရွက်မည်။ လို့ တိတိကျကျပါ ပါတယ်။အဲဒီမှာ ရေးထားတာက တောင်သူလယ်သမားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေကို ဆိုလိုတာပါ။ ကုမ္မဏီကြီးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ မဖြစ်ရပါဘူး။
ဦးဌေးဦးတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ဘယ်လောက်အထိ ဆန့်ကျင်နေသလဲဆိုရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အခြေခံမူ ၃၆(ခ)မှာ နိုင်ငံတော်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဖြစ်စေ၊အစုအဖွဲ့က ဖြစ်စေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဈေးကစားမှုပြုခြင်းဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်မည်။ လို့ တိတိကျကျ ပါထားပါတယ်။ အဲဒီအခြေခံမူနဲ့ဆိုရင် အခုဦးဌေးဦးတင်သွင်းတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေမူကြမ်းက ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
ဥပမာ - ၂၀၁၁ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ(မူကြမ်း)မှာ ပါဝင်တဲ့ ပုဒ်မ ၂ (က) မှာကိုက လယ်ယာမြေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လယ်ယာမြေဟူသည် နိုင်ငံတော်က အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဆိုတဲ့ ပါနေတဲ့ စာသားတစ်ခုတည်းကပဲ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ချယ်လှယ်ပိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“ဦးဌေးဦး တင်သွင်းတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေမူကြမ်းကို တောင်သူလယ်သမားတွေအပေါ်မှာ ကုမ္မဏီကြီးတွေက ချယ်လှယ်လို့ရအောင်သာ တင်သွင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့  အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တင်သွင်းတဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းရဲ့ ပုဒ်မတိုင်းမှာ ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့က ဒီဥပဒေကို အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲပေးဖို့ တောင်းဆိုတာပါ။” လို့ တောင်သူလယ်သမားအရေးကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကိုမျိုးသန့်က ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
သမ္မတကြီးထံသို့ တောင်သူလယ်သမားတွေက ပေးပို့တဲ့စာ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရှားပါးပိုက်ဆံများကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူလျက်ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါသော ပိုက်ဆံများကို အ၀ယ်လိုက်လျက်ရှိ
by Myit Makha Mediagroup on 13 Dec, 2011
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် မောင်ကောင်း၊ စံလင်း၊ ရှမ်း အစရှိသည့် ရှားပါးပိုက်ဆံများကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူလျက်ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါသော ပိုက်ဆံများကို အ၀ယ်လိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှားပါးပိုက်ဆံဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမှာ ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ လာကြောင်း ငွေကြေးအဟောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရှိရသည်။
“ပိုက်ဆံဈေးကွက်ကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ် ၊ အဓိက ၀ယ်နေတာကတော့ မောင်ကောင်းပါ။ သူ့ပိုက်ဆံတွေမှာ မောင်ကောင်း လက်မှတ်ပါမယ်၊ ရှုပီးပါမယ်၊ တစ်ရာတန်ဆို ဒေါင်းတံဆိပ်နဲ့ ရှိတယ်။ နောက်လယ်ထွန်တာ ဆင်သစ်လုံး ဆွဲတာ အဲလိုမျိုးတွေပေါ့ ဈေးကတော့ ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ်ပဲ၊ အများဆုံး အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်တာက တစ်ဆယ်တန် ဆို တစ်သောင်းခွဲအထိ ပေးဝယ်ပြီး တစ်ရာတန်ကို ကိုသောင်းနဲ့ တစ်သိန်းကြားမှာ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်တယ် ” ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှ မောင်ကောင်းပိုက်ဆံ ၀ယ်ရောင်းနေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မောင်ကောင်း စံလင်း ပိုက်ဆံများအပြင် ရှားပါးပိုက်ဆံဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ထုတ်ဝေသုံးစွဲခဲ့သော အဖိုးကြီးပုံနှင့် လူငယ်ပုံပါသော ပိုက်ဆံနှစ်မျိုးမှာလည်း ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းဝန်ကျင် ဈေးရှိကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“ ဈေးကွက်အခေါ်ကတော့ အဖေပုံရယ် သားပုံရယ်ပေါ့ ၊ သူမှာကတော့ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ အန္ဒိယကနေ ပိုက်ဆံပေါ်မှာ Burma Only ဆိုပြီး ပုံနှိပ်စက်နဲ့ တစ်ခါတည်း ရိုက်ထားတာရှိသလို မြန်မာပြည်ရောက်မှ ရာဘာစည်းနဲ့ ရိုက်ထားတာ ဆိုပြီး ရှိတယ်။ ရာဘာစည်းနဲ့ ရိုက်ထားတာက ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင် ဖေါင်းကြွလေးတွေပါတယ်။ သူကတော့ဈေးပိုရတယ်ပေါ့။ အဖေပုံပါတဲ့ ပိုက်ဆံက ၁၅သိန်းဈေးပေါက်တယ် သားပုံကတော့ လေးသိန်းလောက်ထိရတယ်”ဟု ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်မှ ၀ယ်ရောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ ငွေကြေးအဟောင်းဈေးကွက်တွင် မောင်ကောင်းပိုက်ဆံ တစ်ဆယ်တန်လျှင် တစ်သောင်းကျပ်မှ တစ်သောင်းခွဲဝန်းကျင်ရှိကြောင်း ၊ စံလင်း လက်မှတ်ပါ တစ်ရာတန်တစ်ရွက်ကို ကျပ်ငွေလေးထောင်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပိုက်ဆံသည် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ ဈေးရှိပြီး ဒေါက်တာဘမော်နှင့် လှရှိန်ပုံပါ ပိုက်ဆံသည် နှစ်သိန်းခွဲရှိကြောင်း ၊ ၁၃၁၄ခု တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ရက် ဟု စာတန်းပါသော ပိုက်ဆံကို တစ်သိန်းခွဲပေးကြောင်းနှင့် ယခုရက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ပါသော ပိုက်ဆံများကို အ၀ယ်များလာကြောင်းသိရှိရသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဇန်န၀ါရီ | ရွေးကောက်ပွဲ မတ်လ
by FNG on December 13, 2011
FNG၊ ၊ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တွေ ကို ရှေ့နှစ် ဇန်န၀ါရီလ မှာ လွှတ်ပေးပြီး
၊ ကြားဖြတ် လွှတ် တော်ရွေးကောက် ပွဲ ကို မတ်လ မှာ ကျင်းပ မယ် လို့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ
အတွင်းရေး မှုး ချုပ် ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့မြေးဖြစ်သူ ဦးသန့် မြင့် ဦးက ရိုက်တာ သတင်းဌာန ကို
ဖမ်းဆီးထား တဲ့ အကျဉ်းသား တွေ အကုန် လုံး သို့မဟုတ် အများစု ကို ရှေ့ လမှာ ပြန်လွှတ်ပေး
မယ့်ပုံ ရှိ ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲ ကို တော့ ဖေဖော်ဝါရီလ သို့ မဟုတ် မတ်လ ထဲ မှာ ကျင်း
ပမှာ ဖြစ်တယ် လို့စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ကို ရောက်ရှိ နေတဲ့ ဦးသန်းမြင့် ဦးက နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်
တွေ ကို ပြောပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ NLD ဟာ ၀င်ရောက် အရွေးခံမယ်၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု လည်းရှိ
မယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လည်းလွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်လာမယ် ၊ လို့သူ က ဆက်ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့ တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပဲ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း က ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ် နိုင်
မယ့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တွေ ကို လွှတ်ပေး မယ် လို့ပြောခဲ့ ပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးခင်အောင်မြင့် က တော့ မနေ့ က ရန်ကုန် မြို့က သူ့ရဲ့နေအိမ်
မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့တွေ့ ဆုံ ခဲ့ ပါတယ်။
ဦးသန်းမြင့် ဦး ၏ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေး သတင်း နှင့် ပတ်သက် ပြီး
ရန်ကုန် မြို့ ရှိ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ခံထား ရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦး ၏ မိခင်
ဖြစ်သူက ” လွှတ်မှ ပဲ လွှတ်တယ် ဆိုတာ ယုံလိုက် တော့ မယ်။ အခု ဘယ်စကား မှ မယုံ ရဲ သေး
ဘူး လို့“FNG ကို ပြောပါတယ်။
စာရေးဆရာ နဲ့သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ နဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေ ရဲ့ ဆက်
ဆံ ရေး ကို လေ့လာ သူ သုတေသီ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းမြင့်ဦးက ဒီလို ပြန်လွှတ်တာ ဟာ ဥရောပ
သမဂ္ဂ နဲ့အမေရိကန် ရဲ့အရေးယူဒဏ်ခတ်မှု တွေ ကို ဖယ်ရှား နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက် ချက် တစ်ခုပဲ
လေ ဟု သုံးသပ် ပြောကြား သည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီး ထပ်မံ ကျင်းပဖို့ကြေငြာ ပြီး သုံးလ နေမှသာ
လို့ပြီးခဲ့တဲ့ လက အစိုးရ အဆင့် မြင့် အရာ ရှိ ကြီး တစ်ဦးက တရား ၀င် ပြောသွား ခဲ့ ပါတယ်။
Cho Tu Zaw – လွမ်းစိမ့် ဇာတ်ကားနမူနာ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထား
ဒါရိုက်တာချိူတူးဇော်ရဲ့ လွမ်းစိမ့် ဇာတ်ကားနမူနာ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထား
မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၁
၈၇၊ ၈၈ ကာလ တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ရုပ်ရှင်ကား “လွမ်းစိမ့်” ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်က မြန်မာပြည်တွင် ဖြန့်ချိပြသရန် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာက တားမြစ်ခဲ့သည်။
ထိုဇာတ်ကား နမူနာကို ပန်းချီမင်းကျော်ခိုင်က ၎င်းဖေ့စ်ဘွတ်တွင် တင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်က အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပေးထားသည်။
လွမ်းစိမ့်. . . ဆိုတာ. နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ဝပ် ဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေ ဂီတ ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ.. ရုန်းကြွတော်လှန်လာတဲ့ အနုပညာ ပစ္စည်းတခုပဲဗျ။
ဒါ ဗီဒီယို ကား သက်သက် မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေး ပါ။
၈၈ မျိုးဆက်ရဲ့ သမိုင်းဝန် ထမ်းပိုးမှုပါ။
သမ္မတက… စစ်ဆင်ရေးရပ်ဖို့ ပြောကြားပေမယ့် စစ်တပ်တွေ… အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာတုန်းပါပဲ
Published on December 13, 2011 by ရွှေအောင်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ထိုးစစ်တွေရပ်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ စာပို့ထားပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က တပ်အင်အားတွေ တိုးချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကေအိုင်အိုပြောခွင့်ရ ဦးလနန်းကို မေးမြန်းချက်။
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ထိုးစစ်တွေရပ်ဖို့ စာထုတ်တယ်ဆိုတော့ ဦးလနန်းတို့ စာအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားပါလဲ။
“အဲဒါသူတို့တွင်းမှာတော့ ထုတ်ချင်ထုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ တရားဝင် တည်ရှိအောင်လုပ်တာမျိုးတော့ ခုထိတော့ မတွေ့ရသေးဘူး။ ဆိုလိုတာက သတင်းစာမှာ ထည့်ပြီး ဖော်ပြထာမျိုး၊ တီဗွီထဲမှာ ထည့်ပြီးကြေညာတာမျိုး မတွေ့ရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စတွေကို တရားဝင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ လူထုတွေအားလုံးကို သိရှိအောင်၊ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကလည်း သိရှိအောင်ဆိုပြီး လုပ်နေတယ်လို့ မြင်ရတယ်ခင်ဗျ။ ဒီကိစ္စက သူတို့အတွင်းမှာပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ သမ္မတရေးတဲ့စာပေါ်မှာ စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ တကယ်ပဲ လိုက်လိုက်လျောလျောနဲ့ သမ္မတရဲ့ ပေးစာပေါ်မှာ သူတို့လက်ခံမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့သမ္မတလည်း ရေးထားတဲ့စာကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် နေ့စွဲနဲ့ဆိုတာ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကို တိုက်ပွဲတွေက ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။ အခုလည်း တပ်မဟာ ၃ ဘက်မှာ တိုက်ပွဲက ဖြစ်နေတုန်းပဲ။”
တပ်မဟာ ၃ ဘက်မှာ မနေ့ကဆိုရင် လေးငါးနာရီကြာ တိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့တောင်​ ​ကြားတယ်။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲက ဘာကြားပါသေးလဲ။
“အဲဒီတိုက်ပွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဒီနေ့မနက် တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ထဲကနေ ထိုးစစ်လုပ်ဖူးတဲ့ သူတို့ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ အချင်းချင်း ညွှန်ကြားချက် ကျနော်တို့ရထားတယ်။ အခုလောက်ဆိုရင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီ။”
သမ္မတက ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို ထိုးစစ်မလုပ်ဖို့ စာပို့တယ်လည်း သတင်းကြားတယ်။ တဖက်ကလည်း အခု ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ဦးလနန်းတို့ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
“အဲဒီအချက်ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်သုံးသပ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖြစ်အင်ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ တောထဲက စစ်တပ်တွေက မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းက စစ်တပ်တွေက ကချင်ပြည်နယ်ထဲကို အလုံးအရင်းဝင်လာဆဲပါပဲ။ ​မနေ့ကလည်း မြစ်ကြီးနားကို ရထားနှစ်စီးနဲ့ဝင်လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဗန်းမော်ဘက်ကိုလည်း မန္တလေးကနေ ရေလမ်းကနေ သင်္ဘော ၂ စီးနဲ့လာတယ်။ သင်္ဘော ၂ စီးအပြင် နောက်သင်္ဘော ၁ စီးပါသေးတယ်။ အဲဒီသင်္ဘော ၁ စီးမှာတော့ စက်ယန္တရားတွေ မိုးကာနဲ့​ အုပ်ထားပြီး​ ပါလာတာ တွေ့တယ်။ နောက်ပြီး ရှမ်းပြည်ဘက်ကလည်း လားရှိုးဘက်ကနေ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းဘက်ကို သူတို့တပ်တွေ စကခ (၁၀) က ၁၀၇ တပ်ရင်းကိုပို့တယ်။ ထူးခြားချက်​ တခုကဘာလဲဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်း တက်လာတဲ့ တခြားတပ်မတွေက တခြား စကခက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ​ အားလုံး ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ ဒေသခံတံဆိပ်တွေ ယူနီဖောင်းမှာ တခါတည်း​ ကပ်ပြီးတော့ တက်လာတာမျိုး​ ​တွေ့ရတယ်။ ဒါကို​ ​ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ဘက်မှာ ဘာတွေ​ လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်ပြီး​ စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်း အများကြီး​ ရှိလာတယ်။ သမ္မတကနေ ထိုးစစ်မလုပ်ဘူး။ စစ်ဆင်ရေးရပ်ဖို့ ပြောကြားပေမယ့် ဒီမှာ စစ်တပ်တွေ တက်လာတဲ့​ အရှိန်ကတော့ မလျှော့သေးပါဘူး။ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာတုန်းပါပဲခင်ဗျ။”
ကုလသမဂ္ဂစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ လိုင်ဇာရောက်ချိန် တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်
Published on December 13, 2011 by မန်းစိုင်းမွန်
ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF အပါအ၀င် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာရေး အထောက်အကူ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ UNOCHA နဲ့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကို ဒီကနေ့ လာရောက် ကြည့်ရှုကြတယ်လို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဒွဲဒီဆန်းက ပြောပါတယ်။
“လိုင်ဇာကိုမနေ့ည ၄ နာရီကျော်မှာရောက်တယ်။ ဒီမနက် ကျနော်တို့IDP ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့ စခန်းကိုလိုက် ကြည့်ရှုပြီးမှ အခု လိုင်ဇာအပြင်ဘက်က စခန်းမှာ ရောက်နေကြတယ်။ အခုတော့ သူတို့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို လာလေ့လာတဲ့သဘော။ လေ့လာပြီးမှ နောက် ဘာတွေကူုညီရမလဲ ဆိုတာ နောက်မှသူတို့ ဆုံးဖြတ်မယ်နဲ့ တူတယ်။ အခုတော့ အိမ်သုံးပစ္စည်းပါတယ်။ ပစ္စည်းတင်တဲ့ကားက ၇ စီး။ အရာရှိတွေ စီးတဲ့ကားက ၂ စီး အားလုံး ၁၀ စီးပါတယ်။”
လောလောဆယ် လိုင်ဇာဒုက္ခသည်စခန်း ၄ ခုမှာ ကချင်ဒုက္ခသည် တသောင်းကျော် ရှိပါတယ်။ လိုင်ဇာအပြင်ဘက်မှာလည်း တသောင်းကျော်ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားအရှေ့ဘက်ကနေ ရှမ်းပြည်နယ်စပ်အထိ စုစုပေါင်း ကချင်ဒုက္ခသည် ၄၅၀၀၀ ထောင်ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေ ရောက်နေပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာဒေသကို မြန်မာ အစိုးရတပ်တွေက တပ်အင်အား အမြောက်အမြားတိုးပြီး ထိုးစစ်ဆင်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ဦးဒွဲဒီဆန်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
“သတင်းအရတော့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် နေ့စွဲနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ အမိန့် ပေးထားတယ် ဆိုတာတော့ ကြားပါတယ်။ လက်တွေ့ ရှေ့တန်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတော့ ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ တပ်ရင်းပေါင်း ၁၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်နေတယ်။ တပ်မ ၈၈၊ ၃၃၊ ၂၂၊ ၉၉ ပြန်တက်လာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီနေ့လည်း ဆင်လုံဟဲ ဟိုဘက်မှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတယ်။”
နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကေအိုင်အိုနဲ့ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေ တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ရွှေလီမြို့မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အတွက်​ ​တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်တွေကို ရပ်နားခဲ့တာတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကနေပြီး ကေအိုင်အိုကို တိုက်နေတာတွေ ရပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြားက စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။
မြ၀တီတံတား ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြတ်သန်းခွင့် မရသေး
Published on December 13, 2011 by မင်းလွင်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီ-မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဖွင့်ခဲ့တာ တပတ်ကျော်ပေမယ့် ခုချိန်ထိ မြန်မာဘက်က တရားဝင် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်တာ သွင်းတာ မရှိသေးပါဘူး။
တနှစ်ကျော်ကြာအောင် ပိတ်ထားတဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က ချစ်ကြည်ရေး တံတားကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကုန်သွင်းခွင့်လိုင်စင် ရဖို့ကိုတော့ နောက် သတင်းပတ်အထိ ကြာမယ်လို့ နယ်စပ်က ကုန်သည်တွေက ပြောကြပါတယ်။
မြ၀တီမြို့က ကုန်သည်တဦးက “ကုန်တွေတော့ မပေးကူးသေးဘူး။ အခုက လူတွေပဲ ပေးကူးသေးတယ်။ ချက်ချင်းတော့ မရသေးဘူး။ ကုန်ကူးခွင့် လိုင်စင်တွေဘာတွေ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါတွေ လုပ်ရသေးတယ်။ သူတို့ပြောတာတော့ အဲဒါတွေကို လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ဘေးကင်းတယ်လို့ ပြောတာပဲ။ သူတို့မှာ လုပ်ရတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိတယ်။”
မြန်မာဘက်က ကုန်သည်တွေဟာ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လိုင်စင်ရပြီးမှ တရားဝင် ကုန်တင်သွင်းခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန် လိုင်စင်ဟာ တနှစ်သက်တမ်းသာ ရှိတဲ့အတွက် ပြန်လျှောက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
မြ၀တီမြို့က ရွှေမြန်မာ တောင်းအေ့စ် ကားလိုင်းကနေ အစီး ၄၀ လောက် မဲဆောက်ကို နေ့စဉ် ခရီးသည်တွေ တင်ဆောင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အတွက် ထိုင်းခရီးသည်တင် ကားလိုင်းသမားတွေ မြန်မာဘက်ကလာတဲ့ ရွှေမြန်မာ ကားလိုင်းကို ဖြတ်သန်းခွင့်မပေးဖို့ အရေးဆိုလာနိုင်တယ်လို့လည်း မဲဆောက် ဒေသခံတဦးက ပြောဆိုပါတယ်။
“ကားသမားတွေက ဒီတံတားကို ကားတွေနဲ့ပိတ်ချင်တယ်။ ပိတ်လို့မရဘူး။ ဒီတခေါက် တံတားပိတ်လိုက်ရင် ပိုဆိုးမယ်လေ။ ဒီကားပြဿနာကိုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ ထိုင်းဘက်က ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့ ဘာတို့က။ ဒါပေမယ့် ခက်တာကလည်း ဒီမှာက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့ မကျေနပ်ရင် အရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ သူတို့အရေးဆိုလိမ့်မယ်။ သူတို့အရေးဆိုခဲ့ရင် သူတို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပဲ ရှင်းရမှာပေါ့။”
မြ၀တီ-မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ ထိုင်းကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းတွေ ကျသွားတယ်လို့လည်း ရန်ကုန်က ကုန်သည်တဦးက ဒီဗွီဘီ ပြောပါတယ်။
“ဈေးတွေပြန်ကျတယ်။ ဟိုတရက်ကတော့ ဈေးတအားတက်တယ်။ အခုတလော ခွင့်ပြုတာ အဓိကတော့ ၅ မျိုးပေးမယ်လို့ ပြောတာပဲ၊ အချိုမှုန့်တို့၊ အချိုရည်ဗူးတို့၊ ၅ မျိုးလေ။ အဲဒါတော့ ပြောတယ်။ ဈေးကျတာပေါ့။ အရင်တုန်းက ကျပ် ၂၄၀၀ လောက်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းဆိုရင် ကျပ် ၂၁၀၀၊ ၂၀၀၀ လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။”
အင်္ဂါ, 13 ဒီဇင်ဘာ 2011
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတလျှောက် ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ဖို့အတွက် ရှေ့လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ အစည်းအဝေးကို စီစဉ်သူတွေနဲ့ နည်းစပ်သူတွေကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရပ်သားအစိုးရသစ်ကို နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး တွန်းအားပေးဖို့ အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စဟယ်လာရီကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် အခု ၀မ် ရဲ့ ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ရေရှည်နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံလာခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရဖက်က တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်နဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့ ဆည်ကာတာ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှုက ဆက်ဆံရေးမှာ အဖုအထစ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်က မြန်မာနဲ့ အမေရိကန်ကန်အကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာမှုက တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ခြိမ်းခြောက်မှုတခုအဖြစ် မမြင်သင့်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပီကင်းမြို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့ခရီးစဉ်အပြီး အင်္ဂါနေ့က သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာ မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ် က အမေရိကန်နဲ့မြန်မာရဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့် တရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ် မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စိုးစဉ်းမှမရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟယ်လာရီကလင်တန်က မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း အရပ်သားအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆက်လက်အကောင်ထည်ဖေါ် လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ထားတာတွေကို ယုတ်သိမ်းပေးဖို့ အမေရိကန်ဖက်က စဉ်းစားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတစောင်က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်ဖူးဆိုရင် မြန်မာနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆက်ဆံမှုကို ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
တချို့ကတော့ ၀န်ကြီးကလင်တန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ တရုတ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ အပေါင်းအပါဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်ဘက် ယိမ်းလာအောင် ကျိုးပမ်းချက်တရပ်အဖြစ်မြင်နေကြပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သူ ဦးကိုကိုလှိုင်
ထွန်းထွန်း | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၃ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E.Mr.K.Shanmugam ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာ မြန်မာ့
နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများကို လာရောက်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏
နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောဆိုသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သမ္မတ အကြံပေး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ရဲမှူးကြီး စစ်အေး (ငြိမ်း)နှင့် ဒေါက်တာစိန်လှဗိုလ်တို့အား တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်အထိ သုံးရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တရားသူကြီး ချုပ် ဦးထွန်းရှိန်အပြင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးတို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိသည်ဟု စင်္ကာပူနိုင်ငံထုတ် Channel News Asia သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆဋ္ဌမမြောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လအထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၁၈.၆၁၃ သန်းအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ် Eleven ဂျာနယ်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့နှင့် စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးကိုကိုလှိုင်အား မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ထွန်းထွန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့နဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကို အဓိက ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသလဲ။
“အဓိက ကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည်ကို လာတာကတော့ Introducotry ပေါ့နော်။ မိတ်ဆက် အနေနဲ့ လာတာပါပဲ။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေကို သူကိုယ်တိုင် လာရောက်ပြီးတော့မှ လေ့လာမယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့မှ စင်္ကာပူက ရှိနေတဲ့ ကျန်တဲ့ စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ ဒါတွေ အကုန်လုံးကလည်းပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြီးတော့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့က စိတ်ဝင်စား
နေတယ်။ ဒီက စီးပွားရေးလုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ၊ အခြေအနေတွေ၊ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီအခြေအနေတွေက လာပြီးတော့မှ သူက ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ လေ့လာ စူးစမ်းတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်”
ဒါဆိုရင် နိုင်ငံရေးထက် စီးပွားရေးအတွက် လာတဲ့ခရီးစဉ်လို့ ပြောလို့ရမလား။
“နှစ်ခုကတော့ တွဲနေတာပေါ့။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တည်ငြိမ်မှလည်းပဲ စီးပွားရေးကလည်း လုပ်လို့ ကောင်းမှာကိုး။
နောက် ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းပဲ ဘယ်လောက်ခိုင်မာလည်းပဲဆိုတာ သူက သိချင်မှာပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဥပဒေသမား ဖြစ်နေတော့လေ။ ဆိုတော့ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေ အကုန်လုံးကို နည်းနည်းစီ
ပေါ့လေ။ သူသိချင်တာတွေ မေးသွားတဲ့သဘောပါပဲ”
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာကော စင်္ကာပူသဘောထား ဘယ်လိုရှိတယ်လို့ သိရလဲ။
“စင်္ကာပူကတော့ အခြားသော အာဆီယံ မိသားစုနိုင်ငံတွေလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကြိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို သူ ပြောသွားပါ တယ်။ နောက်တခုက အခု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေသစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပွင့်လန်းလာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေပေါ့လေ။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ စင်္ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နှစ်ဖက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့
နေရာတွေမှာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းလည်း သူပြောပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ ရှိလို့ ရှိရင်လည်းပဲ စင်္ကာပူက ပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲဆိုတာလည်း သူပြောသွားပါတယ်”
စင်္ကာပူအတွက်ကော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်လုပ်ငန်းတွေ ရှိနိုင်သလဲ။
“စင်္ကာပူကတော့ အထူးသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အဓိကထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူတို့စိတ်ဝင်စားတာကတော့ ဥပမာ…ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါ့လေ။ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေမှာ စင်္ကာပူရဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ကျန်တဲ့ စက်မှုလက်မှုတို့၊ နောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ့လေ။ ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းလိုဟာမျိုးတွေ။
နောက်ပြီးတော့ တခြားသော စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေ။ သူကတော့ အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့
နေရာမှန်သမျှကိုတော့၊ သူတို့က ငွေပိုငွေလျှံရှိတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သဘော ရှိပါတယ်”
အခု မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာက ဝန်ကြီးတွေ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တွေလာတာဟာ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားလာတာလို့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ သမ္မတအကြံပေး အနေနဲ့ကော ဘယ်လိုမြင်ပါ သလဲ။
“မှန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဆိုတာတော့ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ် အတည်ပြုပြီးတော့ လုပ်ကြ တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ် ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်အကျိုးလည်းရှိသလို သူ့အကျိုးလည်းရှိမှ၊ Win-Win Situation ပေါ့နော်။ အဲဒီဟာကို မှီတည်ပြီးတော့မှ အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် ဧရိယာ နယ်ပယ်တွေမှာ ပိုပြီးတော့မှ တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာကြတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့ ကလည်းပဲ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် လာသလို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုပြီးတော့မှ အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်မယ့်နေရာတွေမှာ ပိုပြီးတော့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲ လုပ်ဆောင်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံကို အနောက်နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ထားတော့ စင်္ကာပူက တဆင့် လိုအပ်တာ
တွေ ဝယ်သွင်းရသလို ငွေမည်းကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေသူလို့ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ စင်္ကာပူနဲ့ ဒီလိုမျိုး စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှု ထပ်တိုးလုပ်ရင် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်နိုင်မလား။
“အခုက တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားက အရင်နဲ့ မတူပဲနဲ့ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ အရင်တုန်းက ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မို့လို့ရှိနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြားထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း ပျောက်သွား
တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပုံမှန် ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ့် နိုင်ငံ တခု အဖြစ်နဲ့ ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲဒီလို ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ စင်္ကာပူအနေနဲ့ကလည်းပဲ နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးအရ
ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အခါ ကျတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက်ကို အများကြီး အထောက်အကူပေးနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်”
မြန်မာဘက်က အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား မထိခိုက်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ။
“ကျနော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာပေါ့နော်။ ကျနော်တုိ့ရဲ့ ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာကိုက အပြန် အလှန် ချိန်ညှိမှုတွေ၊ စစ်ဆေးမှုတွေ ရှိနေပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးဟာ ကိုယ့်အမျိုးသား
ရေး အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်စေဘဲနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စိစစ်မှုတွေ၊
လေ့လာမှုတွေနဲ့ သုံးသပ်မှုတွေကတော့ ပညာရှင်တွေကော၊ ဥပဒေပြုတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ နောက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ စသဖြင့်ပေါ့နော်။ နောက် မီဒီယာပေါ့။ အားလုံးကနေပြီးတော့မှ လေ့လာစိစစ် သွားကြဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ
ကောင်းတဲ့ဟာတွေ ယူမယ်။ ထိခိုက်မယ့်ကိစ္စတွေကို ပြန်ပြီး ညှိနှိုင်းကြရ မှာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ လုပ်သွားကြရမယ့် သဘောရှိပါတယ်”
နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေ ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာဘက်က ဘယ်လိုဥပဒေတွေကို ကြိုတင် ပြဋ္ဌာန်းသင့်သလဲ။
“အဲဒီဥစ္စာတွေ အကုန်လုံးကတော့ လုပ်နေပါတယ်။ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့မှ ကုမ္ဗဏီတွေ ဥပဒေ၊ နောက်ပြီးတော့ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ဆောင်မှုကို တားမြစ်တဲ့ဥပဒေ စသဖြင့် စီးပွားရေးထဲမှာ ဥပဒေတွေ လုပ်နေသလိုပဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်နေတာ၊ ပြုစုနေတာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်”
“အဲဒီလိုပဲ အထူးသဖြင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း Substainble Development လို့ခေါ် တဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း တိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်ဟာကိုမှ မထိခိုက်ပဲ တိုးတက် နိုင်ဖို့ဆိုတော့ အထူးအက်ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ဖို့လည်းပဲ လုပ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ လွှတ်တော် အဖွဲ့အစည်း ကလည်းပဲ စနစ်တကျ ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ လွှတ်တော်အနေနဲ့က လည်းပဲ ဒါတွေကို လေ့လာပြီးတဲ့ အခါကျတော့ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါအပြင်ကိုပဲ မီဒီယာတွေက ထောက်ပြနေတာ အားလုံးကိုလည်း အားလုံးကနေပြီးတော့မှ သေချာစိစစ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါ ကျတော့မှ လိုအပ်နေတာတွေ ထည့်သွင်း
NLD 'ဒီလှိုင်း' စာစောင် အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေမည်
မျိုးသန့် | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ရပြီဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က ပါတီ မှတ်ပုံတင် ပြီးပါက “ဒီလှိုင်း” အမည်ဖြင့် အပတ်စဉ်စာစောင်ကို တနင်္ဂလာနေ့တိုင်း ဖြန့်ဝေသွားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု အယ်ဒီတာများထံမှ သိရသည်။
ယင်းစာစောင်ကို သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နှင့် စာရေးဆရာ မောင်မိုးသူက နာယကအဖြစ် တာဝန် ယူမည်
ဖြစ်ကာ ဦးအုန်းကြိုင်၊ မုံရွာအောင်ရှင်၊ ဖျာပုံနီလုံဦး၊ ငြိမ်းသစ်နှင့် နီမိုလှိုင်တို့က အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ပါဝင် မည် ဖြစ်သည်။
“စာစောင်နာမည်ကတော့ ဒီလှိုင်းပေါ့၊ ဒီမိုကရေစီလှိုင်းများ ဆိုတာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီလှိုင်းလို့ နာမည် ပေးထား တာပေါ့။ အဲဒါကို ထုတ်ဝေခွင့်ရတာနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်မယ်၊ သတင်းစာဆရာတွေကလည်း ဝိုင်းရေးကြလိမ့်မယ်။”
ဟု စာစောင်ကို တာဝန်ယူမည့် အယ်ဒီတာတဦးဖြစ်သူ ကိုငြိမ်းသစ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပထမဆုံး ထုတ်ဝေမည့် ပါတီစာစောင်တွင် ပါတီ၏ မူဝါဒနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ နှစ် ၂ဝ အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်
ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပါတီကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အကြောင်းနှင့်
ပြင်ပနိုင်ငံရေးပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များ ပါဝင်မည်ဟု သိရသည်။
တရားဝင် တည်ထောင်ခွင့်ရပါတီများအနေဖြင့် ပါတီစာစောင်အား စာပေစိစစ်ရေးသို့ တင်ပြရန်မလိုဘဲ ထုတ်ဝေခွင့် ရှိသည်။ သို့သော် ထုတ်ဝေခွင့်အတွက်ကိုမူ စာပေစိစစ်ရေးသို့ မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ်တသိန်းနှင့် အာမခံကြေး ငါးသိန်း ပေးသွင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အာမခံကြေးတင်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျနော်တို့မှာ ရေးတဲ့အရေးအသားတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု လွန်လွန်ကျွံကျွံဖြစ်လာရင် အဲဒီငါးသိန်းထဲက ဖြတ်မယ့်သဘောပါ။” ဟု မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီ - PDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေမျိုးဝေက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ PDP ပါတီမှာ ဒိုင်ဗားစတီး - Diversity အမည်ဖြင့် လစဉ် ပါတီစာစောင် ထုတ်ဝေလျက်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီတခုဖြစ်သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - SNLD ကလည်း ယခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်းက ပါတီအာဘော် အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရန်အတွက် စီစဉ်ခဲ့သေးသည်။
NLD မှာ ပါတီသစ်တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင်အပါအဝင် တည်ထောင်သူ ၂၁ ဦးဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းလျှောက်ထားမှုကို အင်္ဂါနေ့တွင် ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက အတည်ပြု ပြော ဆိုသည်။
ယခုအခါ တရားဝင် တည်ထောင်ခွင့်ရပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရွေးချယ်ကာ ကော်မရှင်သို့ လာမည့် အပတ်အတွင်း သွားရောက်လျှောက်ထားမည်ဟု ပါတီပြောခွင့်ရ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
NLD သည် ပါတီအမှတ်အသားအဖြစ် အနီရောင်အောက်ခံတွင် အဖြူရောင်ကြယ်၊ ရွှေရောင်ခွပ်ဒေါင်းပုံနှင့် အဖြူရောင်ဖြင့် ရေးသားထားသည့် “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်” စာတန်းကို အောက်ခြေ တွင် ရေးထိုးထား သည့် အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုသွားမည် ဟုသိရသည်။
ကျော်ခ | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA မှာ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူသွားသော်လည်း ကရင်တပ်အချင်းချင်း တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မည် မဟုတ်သည့်အပြင် နားလည်မှု ရှိရှိ လုပ်ကိုင်သွား မည်ဟု ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU က ပြောဆိုသည်။
၁၉၉၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း KNU အတွင်းမှ DKBA အဖြစ် ခွဲထွက်သွားကာ အကျိုးဆက်အဖြစ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ၏ ဌာနချုပ်ဖြစ်သည့် မာနယ်ပလောစခန်းမှာ ကျဆုံးခဲ့ဖူးသည်။
ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် တန်းတူရေးအတွက်အတွက် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေ သည့် KNU မှာ ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ၄ ကြိမ်တိုင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း တစုံတရာ သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ပေ။
ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ KNU ဒုဥက္ကဌ ပဒို ဒေးဗစ်သာကပေါကို မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် ကျော်ခက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။
ဗိုလ်မှူးစောလားပွယ် ဦးဆောင်တဲ့ DKBA အဖွဲ့ဟာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲခြင်းမပြုလုပ်ခင် KNU တပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အစိုးရတပ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ အခုသူတို့က အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်လိုက်တော့
KNU နဲ့ KNU ရဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေ အတွက် စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားတွေများ ရှိမလားခင်ဗျ။
KNU ဒုဥက္ကဌ ပဒို ဒေးဗစ်သာကပေါ
“မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့KNU ကို ပြန်ပြီးတော့ စစ်ရေးအရ တိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ DKBAသမိုင်းရဲ့ အစကိုက အစိုးရက အကွက်ဆင်ပြီး အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမဲသုပ်ပြီး ခွပ်ခိုင်းခံရတဲ့ သမိုင်းဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကို ကျနော်တို့အားလုံး ပြန်မရောက်ချင်ကြဘူးဆိုတာကို သူတို့လဲသိပါတယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ အချင်းချင်း နားလည်မှု ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က ကရင် အချင်းချင်းပဲ။ အရင်က လက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲ။ အရင်က အစိုးရရဲညာဏ်ဆင်ထိုးခွဲမှုမှာ အလိမ် ခံရတယ်။အခုလဲ အလိမ်ခံရပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်သွား တယ်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့
လည်း သူတို့ အဆင်ပြေသလို ရပ်တည် ပေါ့ဗျာ”
“တခုတော့ ရှိတာပေါ့ သူတို့လွယ်လွယ်နဲ့ အပစ်ရပ်သွားတာက အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် ကြားခံ အဖြစ် လုပ်ပေးတဲ့ ပွဲစားတွေက လိမ်သွားတာ။ ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတော့ တဖက်မှာ KNU က လျှို့ဝှက် သဘောတူညီချက်တွေ လုပ်နေပြီ ခင်ဗျားတို့ မြန်မြန်လုပ်၊ နောက်ကျရင် KNU က တဆယ်ရတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့က ၂ ကျပ်ပဲ ရလိမ့်မယ် ဆိုပြီးတော့ DKBA ကို ဖဲ့ထုတ်သွားတယ်။ DKBA ကလည်း ရိုးတယ်မို့လား လူရိုးတွေလေ”
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဘားအံမြို့မှာ အပစ်ရပ်ရေး ထပ်ပြီး
ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ် ဆိုတာရော ဟုတ်လား။
“မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဟုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ သတင်းထုတ်ပြန်မှာပါ”
KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရသစ်နဲ့ အပစ်ရပ်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာ ၄ ကြိမ်ရှိပြီလို့ သိရတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှု
တွေကနေ အပစ်ရပ်ဖို့ သဘောတူညီမှု ဘာကြောင့် မရနိုင်သေး ဖြစ်နေတာလဲ ခင်ဗျ။
“ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတာက တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲဖို့၊ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေမှာ လာချထားတဲ့ အစိုးရတပ်တွေ ရုတ်သိမ်းပေးဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ အလားအလာ ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စ၊ ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုရှိရမယ်။ လှု့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ရပ်ဖို့ ကျနော် တို့ဘက်က ဆွေးနွေးထားတာပဲ”
“ကျနော်တို့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့တာ ၄ ကြိမ်ရှိပြီ။ ဝန်ကြီး အဆင့်ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်မင်း နဲ့ ၂ ကြိမ်၊ ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့က ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံပြီးပါပြီ။ သူတို့လည်း သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို တင်ပြလိုက်ပါ့မယ်။ တင်ပြလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတာ ပြန်ပြန်သွားတယ်။ ဘာမှ တိုးတက်မလာပါဘူး။ အခု ကချင်ဘက်မှာလည်း နေ့တိုင်းလို တိုက်နေတာပဲ”
“မပြေလည်တာကတော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဘာမှ တိုးလုပ်လာတာ မရှိဘူး။ တိုးလုပ်လာရင်တော့ နှစ်ဘက်
KNU က မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးပြီးရင် အခြားလူ အမည်ခံ နာမည်တခုနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲ့စရီးယန်းဘက်မှာ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် ကုမ္ပဏီ တခု ဖွင့်မယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။
“အစိုးရဘက်ကနေ အပစ်ရပ်ဖို့ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ကြားမှာ စီးပွားရေးသမားတွေက ကြားခံ ပါလာတယ်။ အဲဒီကြားပွဲစားတွေက ဟိုဘက်ကလည်း ရမယ်။ ဒီဘက်ကလည်းရမယ် ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ အဲဒီလို စီးပွားရေးသမားတွေ လည်း ရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေက သူတို့လိုချင်တဲ့ အဆင့်မရဘူးဆိုရင် မဟုတ်မှန်သတင်းတွေ လျှောက်လွှင့်နေတယ်။ ပြီးရင်နောက်မှာလည်း UNFC ကိုတိုက်ခိုက်တယ်”
KNU ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေ ဖြစ်တဲ့ တပ်မဟာ ၃ နဲ့ ၅ နယ်မြေတွေထဲမှာ KNU က ရွှေတူးဖေါ်ရေး လုပ်ငန်း
တွေ လုပ်ဖို့ ကားလမ်းတွေ ဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရသလို တပ်မဟာ ၂ နဲ့ ၃ နယ်မြေ
တွေမှာရှိတဲ့ ဝါးဘိုးဝါးတွေကို ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်ဘို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်း နယ်စပ် လက်နက်ကိုင် တပ်တွေ ဘက်ကနေလည်း အသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။
“ခင်ဗျားကြားတဲ့သတင်းက မမှန်ပါဘူး။ အဲဒီအစီအစဉ်တွေကို လုပ်နေတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါတွေက မလိုသူတွေ
နိုင်ငံတချို့ကတော့ မြန်မာအစိုးရသစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာတယ် လို့ မှတ်ချက်ပြုကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့ကြတော့ အစိုးရက ဘယ်လို အတိုင်းအတာမျိုး ဖော်ဆောင်မှ ပြည်စုံမယ်လို့ ယူဆထားလို့လဲ။
“ဦးသိန်းစိန်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ဝဝ လောက်တော့ လွှတ်ပေးတာပဲ။ နောက်ဟိုဒီ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်တွေ လုပ်ပေးတာ။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာလေးတွေရှိတာပေါ့။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကလည်း တကယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးသလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး”
“အဓိက ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်စစ်ဆင်နေတဲ့ ကိစ္စပဲ။ အဲဒါတွေ ကိုရပ် အဲဒါတွေရပ်ရင်တော့ ကျနော် တို့နဲ့ အလားအလာကောင်းမယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့နဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့ဆိုတာက အစိုးရပေါ်မှာ မူတည်တယ်လေ။ သူတို့
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဖို့လိုတယ်။ မရပ်ရင် ဘာတိုးတက်မှုမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး”
“ကျနော်တို့ အခုစဉ်းစားနေတာက ဦးသိန်းစိန်က တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိလားမရှိလား ဒါပဲ။ သူတကယ်ပဲ အပစ်ရပ်ချင်လား။ စစ်တပ်အပေါ်မှာ သူအာဏာရှိလား။ သမ္မတဖြစ်ရင်တော့ သူအာဏာရှိရမှာပေါ့။ သမ္မတ အတု ဆိုရင်တော့ အာဏာမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ ကျနော်တို့ကတော့ သမ္မတ အစစ်နဲ့ပဲ
ဆွေးနွေးချင်တယ်။ အစစ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှ အလုပ်ဖြစ်မယ်။ အစစ်မဟုတ်ရင် ကျနော်တို့အတွက် ပရိယာယ်ပဲ ဖြစ်နေ မယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတ တကယ်အစစ်လား။ အတုလား စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့”
သဲသဲ | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၃ မိနစ်
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရေနံရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသည့် ဖောက်ခွဲရေးမိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခု (Detonator) အား ကလေးငယ်တဦး ဆော့ကစားမိရာမှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖခင်နှင့် ကလေးငယ်တဦး
ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တခု ဘိုကလေးမြို့နယ် အုန်းဘိုင်းကျေးရွာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နေအိမ်ရှိ မိသားစု ၅ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားပြီး ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ဘယ်ဘက် လက်ချောင်း သုံးချောင်း ပြတ်သွားခဲ့ပြီး သားဖြစ်သူ ဆယ်နှစ်အရွယ်
မောင်ကောင်းလမ်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လွင့်စင်လာသည့် သတ္တုစများ ဝမ်းဗိုက်၌ ထိမှန်ခဲ့သည်။
“နှစ်ယောက်က အခြေအနေဆိုးတယ်။ အဲဒီမှာ တယောက်က လက်ဖြတ်ပစ်ရတယ်၊ ကလေးတယောက်က ဗိုက်ခွဲ ပြီးတော့ ကျည်ဖူးလိုဟာလေး ခွဲထုတ်ထားရတာပေါ့” ဟု ဘိုကလေးမြို့ ကုတင် ၁ဝဝ ဆေးရုံမှ ဆေးရုံဝန်ထမ်း တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသည့် မိသားစုဝင်တချို့အား ဘိုကလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ကုသမှု ခံယူနေသည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ: Nay Wai's Facebook)
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအားလုံးမှာလည်း ဆေးရုံတွင်း ကုသမှု ခံယူနေသည်ဟု သိရသည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရလာလဲ မသိဘူး။ မိဘတွေလည်း မသိဘူး။ ညကျတော့ အဲဒါကို ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တာ အဲဒီအစလေးနဲ့ ဓါတ်မီးနဲ့ သွားတေ့မိတာကနေ ထပေါက်တာပဲ” ဟု ဒဏ်ရာရှိသွား သူ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်မျိုးဆန်း ပြန်ပြောပြသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ဒေသအာဏာပိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိများ လာရောက်ခဲ့ပြီး ရေနံ ရှာဖွေရန် အသုံးပြုပြီးနောက် မပေါက်ကွဲဘဲ ကျန်ရှိခဲ့သည့် မိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိခဲ့သည့် မိုင်းသီး အစိတ်အပိုင်းများအား သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည်ဟု ရွာသားများက ပြောဆိုသည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘိုကလေးမြို့နယ် ရဲစခန်းနှင့် အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း သော် လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာအတွင်းက ဘိုကလေးမြို့နယ် အုန်းဘိုင်းကျေးရွာအနီး၌ ကုမ္ပဏီတချို့မှ မြေကြီးတွင်း မိုင်းခွဲ စမ်းသပ်၍ ရေနံရှာဖွေမှုများ ရှိခဲ့ပြီး မည်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ကိုမူ မသိရပေ။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထိခိုက်သူများအနေဖြင့် လျော်ကြေးတစုံတရာ မရရှိနိုင်တော့ကြောင်း ယင်းဒေသသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မတူကွဲပြား
ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ - PDP ဥက္ကဋ္ဌက သုံးသပ်သည်။
“ဒေသအာဏာပိုင်တွေကလည်း မြန်မာ့ရေနံနဲ့ ဘသာဝ ဓါတ်ငွေ့ဝန်ကြီးဌာနကို ဆက်သွယ်ပြီး cooperation လုပ်ရမှာ။ လှမ်းလက်ပြောပြီး လာတွေ့ရမှာပေါ့။ အခုထိ ဘာမှလာလုပ်မပေးဘူး။ လက်နဲ့ လုပ်စားတာ လက်ပြတ် သွားတော့ ဘာလုပ်စားမတုန်း” ဟု အုန်းဘိုင်းရွာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ PDP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနေမျိုးဝေက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော မပေါက်ကွဲသေးသည့် မိုင်းတချို့ကိုလည်း ဘိုကလေးမြို့နယ် ဆူးပဒိုင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု အနီးတဝိုက်ရှိ လယ်ကွင်းနှင့် ချောင်းစပ်တချို့တွင် တွေ့ရှိနေသဖြင့် ရွာသားများ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြသည်
မြန်မာနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ တာဟာ တရုတ် မြန်မာဆက်ဆံရေး ထိခိုက်သွားစေဖို့ မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ချယ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကို ခေတ္တ ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်း မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ချယ်က တရုတ်အစိုးရကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံတာဟာ မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှ ထိခိုက်စေဖို့ မရည်ရွယ်ကြောင်း၊ မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်လို့လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွက် အကျိုးကျေးဇူး မရှိကြောင်း၊ တရုတ်နဲ့ မြန်မာမှာ ရှည်လျားတဲ့ နယ်နမိတ်နဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေအပြင် ကာလကြာရှည် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အနာဂတ်ကို နှစ်နိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာကို ရုပ်သိမ်းပြီး ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မြန်မာအစိုးရသစ်က မျှော်လင့်နေကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
NLD ပါတီ ပြန်လည် ထူထောင်ခွင့် ပြုပြီ
By featured, လင်းသန့် on December 13, 2011 1:22 pm
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ခွင့်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလိုက်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ကို တည်ထောင်ခွင့် ပေးတယ်ဆိုတာက Permission ပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါကို ကျနော်တို့က နောက်ထပ် မှတ်ပုံ တင်ဖို့ လုပ်ရဦးမယ်” ဟု NLD ပါတီ၏ ပြောခွင့်ရ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
NLD ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင်လည်း ဖော်ပြထားသည်။
“ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတည် တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားချက်များကို စိစစ် ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိရာ ဦးတင်ဦးပါ ၂၁ ဦးတို့က လျှောက်ထားသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားချက်သည် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် ညီညွတ်ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ကော်မရှင်က ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပါတီ ထူထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်” ဟု သတင်းစာများတွင် ရေးသားထားသည်။
NLD ပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ကို လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် နေ့စွဲဖြင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ယခု ပါတီ ထူထောင်ခွင့်ပြုမိန့် ကျပြီဖြစ်ရာ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် လာမည့် သတင်းပတ်အတွင်း နေပြည်တော်သို့ သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
ကော်မရှင်က စိစစ်ဆဲ ကာလတွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့သူ ၂၁ ဦး၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်များကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများက မေးမြန်းစိစစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားမှ အကူအညီယူခြင်းရှိ၊ မရှိ တို့ကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
NLD ပါတီသည် ယခင်အသုံးပြုခဲ့သည့် ခမောက် သင်္ကေတကို အသုံးပြုတော့မည် မဟုတ်တော့ဘဲ ယခုလက်ရှိ ပါတီအလံအတိုင်း အနီရောင် အောက်ခံတွင် အဖြူရောင် ကြယ်နှင့် ရွှေရောင် ခွပ်ဒေါင်းပုံ၊ အဖြူရောင် “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်” စာတန်းကို အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်အား အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကာ အမှတ်တံဆိပ်၏ စံပြု အရွယ်အစားမှာ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ အလျား ၁. ၆၂ လက္မ၊ အနံ ၁ လက္ခ ဖြစ်ကြောင်း NLD က ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြေညာထားသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လယ်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်၏ နေအိမ်တွင် ၁ နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း၊ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ သိတာကတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မိတ်ဆက်စကားပြောကြတာပါ။ အသေးစိတ်တော့ မသိပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်တော့ မရှိပါဘူး။ မိတ်ဆွေတွေ ပြောကြတဲ့ပုံစံပါပဲ” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ဦးဉာဏ်ဝင်းက တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် များစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေရဦးမည်ဖြစ်ပြီး အခုကဲ့သို့သော တွေ့ဆုံမှုများသည် အလားအလာကောင်းများ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးခင်အောင်မြင့်တို့ တွေ့ဆုံမှုအပေါ် NLD လူငယ်များနှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ လူငယ်များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်သည်ဟု ရှုမြင်ကြသည်။
“ကျနော်တို့ကတော့ အားလုံး အပြုသဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ကြရင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကောင်းသွား မှာပဲလို့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်တယ်” ဟု NLD လူငယ် ကိုကျော်စိုးနိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်သည် NLD ပါတီအနေဖြင့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည့် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း၊ အဆိုပါ ရလဒ်သည် ဖျောက်ဖျက်၍ ရသည့် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း Yangon Times သတင်းဂျာနယ်နှင့် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် ပြောခဲ့သေးသည်။
NLD ပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်မည် ဆိုပါက လွှတ်တော် အကြီးအကဲဖြစ်သည့် ၎င်းနှင့်အတူ လွှတ်တော်ထဲမှ ကိုယ်စားလှယ် များက ကြိုဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြည်သူများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါက လွှတ်တော် တွင်းကို ရောက်ရှိ လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝ သည့် ပညာတတ်တယောက် ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် များစွာ အားကိုးရမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူက ပြောဆိုခဲ့သည်။
NLD ပါတီ ထူထောင်ခွင့်ရပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို စလုပ်နေပြီလို့ NLD ကပြောပါတယ်။ ပါတီကို အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်း နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ဘန်ကောက်ရုံးကနေ မစုမြတ်မွန်က တင်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအစုံက အဖွဲ့ဝင် ၂၁ ယောက် နာမည်နဲ့ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားတာကို ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင်အသိပေး အကြောင်းပြန်ခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ပထမအဆင့် ကျော်သွားပြီဖြစ်လို့ နောက်တဆင့် ဘာတွေလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို NLD သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
“ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ အကြောင်းကြားစာရပြီဆိုရင် ကျနော်တို့လုပ်ရမှာက စတင်တည်ထောင်ဖို့ သွားပြီးတင်တဲ့ ၂၁ ယောက် ထဲက ပထမခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ရွေးရမယ်။ ရွေးပြီးတဲ့အခါကျ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့နာမည်၊ ပါတီရဲ့အလံတော်၊ ပါတီရဲ့တံဆိပ်၊ ပါတီရဲ့သင်္ကေတ၊ ပါတီရဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်၊ ပါတီရဲ့ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဲဒါတွေကို ပြုစုပြီးတော့ အဲဒီ ပ-ခေါင်းဆောင်၊ ဒု-ခေါင်းဆောင်တွေက နေပြည်တော် ကော်မရှင်ကို သွားတွေ့ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်ရမှာ။ အဲဒီအဆင့်ကိုလုပ်ဖို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ်”
ခေါင်းဆောင်တွေကို သဘောတူ ရွေးချယ်မယ့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူကိုလည်း ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါ ပေးဖို့ လိုတဲ့အတွက် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ ၂၁ ယောက်လုံး ပြန်ဆုံပြီး ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ၂၁ ယောက်ထဲမှာ ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ပါတာမို့ ဘယ်တော့ အချိန်အတိအကျဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမဲ့ အမြန်ဆုံး ကြိုးစားမယ်လို့ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ရသွားပြီဆိုရင်တော့ ပါတီအဖွဲ့ဝင်အင်အား စည်းရုံးခွင့်ပါရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီအခါကျရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဆိုတာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ရှိ ပါတီဝင်တွေက ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှာပါလဲ၊ ဦးအုန်းကြိုင်ကတော့ NLD ကို အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်လို့ လူဟောင်း လူသစ် အားလုံးအဖွဲ့ဝင်သစ် ပြန်လျှောက်ကြရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အဲဒီနေရာမှာ လူကြီးတွေရဲ့သဘောထားကတော့လေ လက်ရှိပါတီဝင်တွေလည်း အသစ်ပြန်ပြီးတော့ လျှောက်ထားကြမယ်၊ အဲလို လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ညွှန်ကြားထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့သည်ပင်လျှင်ကို ပါတီဝင်အဖြစ်နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ လျှောက်ကြရမှာပေါ့”
နောင်ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ NLD ပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်တယ်လို့ အသိပေး ကြေညာ ခဲ့ပြီးကတည်းက ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိင်ရေးအတွက်ကိုလည်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၂၁ ယောက်ပါဝင်တဲ့ ဗဟို အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နေရာ လစ်လပ်နေတဲ့ မြို့နယ်တွေ၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NLD သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုဖွဲ့ကြတဲ့ထဲမှာ အလွှာစုံကသူတွေ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အဆိုပြုစာရင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ပါတီရုံးတွေဆီက တောင်းခံထားပါတယ်။
“အဆိုပြုစာရင်းထဲမှာတော့ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ၊ စည်းရုံးရေးမှူး အဟောင်းတွေလည်း ပါဖို့လိုသလို ရပ်မိရပ်ဖတွေ၊ မြို့မိမြို့ဖတွေ ပြီးတော့ လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ NLD အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပါဝင်ကူညီနိုင်မယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ တတ်/သိ ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေ- အဲဒါတွေပါ အကုန်လုံး ပါဝင်အောင်စည်းရုံးပြီးတော့ အောင်နိုင်ရေးကော်မတီဖွဲ့ဖို့ ပြင်ဆင်ပါ၊ စည်းရုံးညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုရင်လည်း လျာထားစာရင်းပေါ့ဗျာ-အောင်နိုင်ရေးကော်မတီကိုတော့ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လျာထားစာရင်း၊ ကျနော်တို့ဆီကို တင်ပါ ဆိုပြီးတော့ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီက ညွှန်ကြားထားတယ်၊ အဲဒီညွှန်ကြားစာအရ ပြည်နယ်၊ တိုင်း တော်တော်များများကတော့ စာရင်းတွေပို့နေတယ်။ ကျနော်တို့ဆီ တချို့ရောက်တာတွေ ရောက်နေပြီ”
ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေထဲက အချက်တချို့ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက် NLD က ပါတီမှတ်ပုံ ပြန်တင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တာပါ။ ကိုယ်စားလှယ် လစ်လပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် အရွေးခံသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ NLD က ပြောထားပါတယ်။ နောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေစည်းရုံးမဲဆွယ်တဲ့အခါ အနီရောင်အောက်ခံမှာ ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ ကြယ်ပုံပါပြီး အောက်ဖက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ စာတန်းပါတဲ့ အလံနဲ့အမှတ်တံဆိပ် သင်္ကေတကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့ အသိပေးခဲ့သလို ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီ အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ခမောက်တံဆိပ်ကို လုံးဝ အသုံးပြုတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တနင်္ဂနွေနေ့ကပဲ အစိုးရထုတ် သတင်းစာတွေကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကတော့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်တော့လုပ်မယ်ဆိုတာကို အသိပေး ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူးရှင်။
မြန်မာအစိုးရ ပညာရေး ဥပဒေသစ် သမိုင်းသင်လျှင် ထောင်ဒ...
ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ တင်သွင်းတဲ့ “လယ်ယာမြေ ဥပဒေ(မူကြမ်း)...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရှားပါးပိုက်ဆံများကို ဈေး...
သမ္မတက… စစ်ဆင်ရေးရပ်ဖို့ ပြောကြားပေမယ့် စစ်တပ်တွေ… ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သူ ဦ...